राशिफलदेखि रेडियो, नेपाली टाइपदेखि मिति रुपान्तरणसम्म एउटै एपमा - Samudrapari.com
टोकियो – के तपाई महत्वपूर्ण नेपाली टुलहरु एउटै एपमा होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? त्यसो हो भने तपाइको लागि मेरो कलम मोबाइल एप प्रभावकारी हुन सक्छ । यस एपबाट सजिलै नेपाली यूनिकोड टाइप गर्न सकिन्छ ।
नेपालीबाट अंग्रेजी र अंग्रेजीदेखि नेपालीमा तिथिमिति परिवर्तन गर्नका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । आज नेपाली रुपैयाँ विदेशी मुद्राको तुलनामा कस्तो छ ? विदेशी विनिमय दर पनि यसै एपमा थाहा पाउन सकिन्छ ।
देशभरका एफएम रेडियोदेखि दैनिक राशिफल एवं क्यूआर कोर्ड स्क्यानर सम्मको फिचर यस एपमा उपलब्ध छ । एप डाउनलोड गर्न गुगलको प्लेस्टोरमा गएर मेरो कलम सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली फन्ट प्रीतिदेखि युनिकोड परिवर्तनका लागि उपयोगी ब्लग मेरो कलमले हालै यो एप सार्वजनिक गरेको हो ।
ब्लग लिंक : https://www.merokalam.com
एपलिंक : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.allsolutioninfotech.merokalam&hl=en